ကိုမောင်အေး ၏ ရသစာစုများ & MUSIC ဟေ့ ... မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ။ မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရမယ်။: နင်.ကို ငါ အလုပ်ထုတ် တယ်
နင်.ကို ငါ အလုပ်ထုတ် တယ်
ကျွန်တော် ရဲ. အားထားရတဲ. အတွင်းရေးမှူး ၀န်ထမ်းမ လေး ကို ပြီးခဲ.တဲ. အပတ်က အလုပ်ထုတ် ပစ်ခဲ.ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဗျ။ ပြီးခဲ.တဲ. အပတ်က ကျွန်တော်. အသက် ၄၀ ပြည်. မွေးနေ.ပေါ.ဗျာ။ ဒီတော. ထိုနေ. မနက်စောစောထ ပြီး အိမ်အောက်ဆင်း ရင် မိန်းမ က "Happy Birthday" လို.ပြောတာ ကြည်နူးမယ် ပြီးတော. အနည်းဆုံးလက်ဆောင်တခုခု ကို လက်ခံမယ် ဆိုတဲ. ခံစားချက်နဲ.ပေါ.ဗျာ။ တကယ်တမ်းကျတော. သူမ က ကျွန်တော. ကို ဂရုတောင် မစိုက်ပဲ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အလုပ်ရူပ် နေပါတယ်။ အင်း ငါ.မှာ ကလေးတွေ ရှိသေးတာပဲ သူတို.ကို ဒီအသက်အရွယ် ရှိ ကျွေးမွေး လာမှ တော. ငါ.ကို "ံHappy Birthday Daddy" တော. ပြောကောင်းပါတယ်။ ဟာ… ကလေးတွေလဲ ကျွန်တော. ကို ဂရုမစိုက်ပဲ မနက်စာ ပဲ ငုံ.စား နေခဲ.တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ. စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ. ရုံးကိုသွားခဲ.ပါတယ်။ ရုံးတံခါးလဲ ဖွင်.ကော
အတွင်းရေးမှူး က "Good Morning ဆရာ၊ ဒါနဲ. ကနေ. က ဆရာ.မွေးနေ.နော်။" ဟာ ဒီတော. ကျွန်တော် အလွန်အံ.အားသင်.သွားခဲ.ပြီး "ဟုတ်တယ် ကွယ်." ဆိုပြောခဲ.တယ်။
ရုံးဆင်းချိန်လဲ ရောက်ရော အတွင်းရေးမှူး ကောင်မလေး က တံခါးခေါက်ကာ
အတွင်းရေးမှူး - ဆရာ ကနေ. ဟာ အရမ်းကို မင်္ဂလာရှိတဲ. နေ.ပဲ၊ နောက်ပြီးဆရာ.ရဲ. မွေးနေ.လဲ ဖြစ်နေတော. ညစာ ထွက်စားရအောင်လား။
ကျွန်တော် - ဟာ ကောင်းတာပေါ.ကွ။လာ သွားကျမယ်။
ဒီလိုနဲ. စားသောက်ဆိုင်ရဲ. သီးသန်. အခန်းထဲမှာ ၂ယောက်တည်း စကားတွေ တ၀ပြီးပြောရင်း အရက်ကလေး သောက်ရင်း စားသောက်ခဲ.ကျပါတယ်။ အဲ.နောက်တော. သူမကို အိမ်ပြန်ပို.ပေးမယ် လို. ပြောလိုက်တော.သူမက "ဆ၇ာ သမီး အခန်းကို လိုက်ခဲ.ပါလား။ ဒီနားလေးမှာပဲ။" ဆိုတော. လိုက်သွားခဲ.တယ်။ သူမ ထပ်တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်။ "ဆရာ အခန်းထဲထိ လိုက်ခဲ.ပါနော်.. နော်… သမီးတစ်ယောက်တည်း နေတာပါ"။ ကဲ ဒီတော.လဲ အခန်းထဲသို. ထိရောက်သွားခဲ.တယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခန်း ထဲ ရောက်ကော သူမ က "ဆရာ သမီး ရေ၀င်ချိုးလိုက်ဦးမယ် ခဏလေးစောင်.နော် " ဆိုပြီး အခန်းလေး တခုထဲ ၀င်သွားတယ်။ တအောင်.နေတော. သူမ က မွေးနေ.ကိတ် အကြီးကြီး ကို ကိုင်လာပြီး ကျွန်တော. မိန်းမနဲ. ကလေး တွေ က နောက်ကနေ ထွက်လာကျပါတယ်။
ဒါနဲ. ကျွန်တော်လဲ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ "ဟေ. ကောင်မ နင်မနက်ဖြန် ရုံးတက်စရာ မလိုတော. ဘူး နင်.ကို ငါချက်ချင်း အလုပ်ထုတ်တယ် " ဆိုပြီး လက်ညိူး ထိုးပြီး အော်ခဲ.တယ်။
ဘာလို.လဲ ဆိုတော. ကျွန်တော် က သူမ ခုတင်ပေါ်မှ ကိုယ်တုံးလုံး ကြီး နဲ. လှဲ နေခဲ.လို.ပါပဲ။
Posted by KOMYOUAE at 3:59 PM
ဒါကတော့ အလုပ်ထုတ်ကို ထုတ်သင့်ပါတယ်ဗျာ..
Myanmar Calendar 2012 Lite
<!-weather in yangon, myanmar on your site - html code - weatherforecastmap.com -- >
A LOT OF KUNG FU MOVIES
Alphazawgyi font download
Buddhist Essential Support Trust (BEST)
CD - 2. Each Dhamma Talk is approximately 1 hour long mogoksayartawgyie
Chinese Martial Art Series Collections
Dhamma Tayar mogok sayartawgyie tayartaw
Dhammapada Myanmar, English
e books ရှာဖွေလိုရသမျှဒီမှာတင်ပေးပါမယ်..လာမွှေပါဗျ
FOOTBALLပွဲစဉ်အပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် High Light ကြည်ကြည်လင်လင်လေးတွေ ကြည့်ရန်
Live score များကြည့်ရန်
M FONT DOWN LOAD FROM KHITLUNGE
Movie, Photo & Music Album ( Nay Zaw )
Pa Yeik Kyii 11
PC Survival Camp
ZAWGYI IN PLANET.COM
ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ E-Books (Myanmar)
ဘောလုံး အားကစား သတင်းကြည့်ရန်
မြန်မာ စာအုပ်များ SHWESAGAR E BOOKS
မြန်မာ့စေတီ ပုထိုးများ Myanmar's Pagoda
Association Of Myanmar Archaeologists
Myanmar (Burma) Website Directory
Myanmar blackmarket exchange rate by Sailor Moon
WEBSITES OF RELIGIONအလှူတကာအလှူတွင်တရားအလှူသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏
ASHINMETTACARA ( UNITED BUDDHIST NET WORKS )
ashinmettacara.com ( BURMESE )
BURMA BORN TAYARTAWMYAR
History of Buddha and Buddhism
MOGOKE ONLINE DHAMMA
Welcome to Dhammaransi.net
ပိဋကတ်သုံးပုံ ပါဠိတော် မြန်မာပြန် စီဒီ(၁)
BURMA NEWS AND ARTICLES
DVB TELEVISION NEWS
NEWS COLLECTION ( ABBSOLUTERIGHT )
NGU YIN PYIN
1990 Party sone Yway kauke pwel BY U KHIN KYAW HAN
30 SOLDIERS BY YHU TAY THA NA OFFICER
99 SANAY (Best General Blog )
AROUND 1930 BY THEIN PHE MYINT
BOOKS IN EHGLISH
BY U KHIN MG GYIE
Can't catch group's Books
DAILY RECORDS OF THE WAR BY THATE PAN MG WA
KAUNGKINKO (Best Poem Blog )
KOMOETHEE (Best Association Blog )
MATHETZIN BEST EDUCATIONS BLOG
MGHLA ( For Myanmar typing practice )
MINDIN (Best Literauture Blog )
NEWSKHITPYAING ( BEST NEWS BLOG )
NIKNAYMAN ( BEST POLITICAL BLOG )
NYABNAR E BOOK
NYILYNNSECK ( BEST BLOG ABOUT BLOGGING )
SHWESAGAR E BOOK
TOMORROWPLAN ( BEST CHARITY BLOG )
ပြည်တွင်း မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များ
existence magazine (Best Myanmar Literature Blog )
INTERESTING STORIES BOOKS & LINKS
CRUNCHYROLL MOVIES ON LINE
DOWNLOAD MYANMAR FONT TO COMPUTER
FREE DOWNLOAD DIVX
Free Online Language Courses & TRANSLATOR
FREE SOFTWARE DOWNLOAD TOGGLE
ITF FOR MARINERS
JAPAN, KOREA, CHINA MOVIES DRAMA
KINGPEACOCK OF MYANMAR
KO MYO UAE MOVIES
Korean Drama Korean Movies
KOREAN MOVIES MY SOJU
MAUNG MYO YING DWING PHIT
MYANMAR BLOG IN KHITPYAINGNEWS
MYANMAR BLOGGERS HELP DESK
MYANMAR COMMUNITY SITE
MYITTAR POTH THA
Service of download analysis toggle
STUDENTS' DICTIONARY ENGLISH TO MYANMAR
The Myanmar blogs all over the world
About me... Handsome, Sweet, Intelligent, Spontaneous, Good Looking, Nice Friends, Charming, Funny, well... Enough about ME! How about you?
Blog Archive Jun 09 (2) Jun 10 (1) Jun 16 (1) Jun 17 (1) Jun 19 (2) Jun 28 (4) Jun 29 (3) Jun 30 (1) Jul 01 (2) Jul 02 (1) Jul 03 (2) Jul 05 (2) Jul 06 (3) Jul 07 (7) Jul 08 (8) Jul 09 (7) Jul 11 (2) Jul 12 (1) Jul 13 (7) Jul 14 (2) Jul 15 (7) Jul 16 (5) Jul 17 (4) Jul 19 (2) Jul 20 (2) Jul 21 (6) Jul 22 (2) Jul 23 (1) Jul 24 (3) Aug 05 (1) Jan 27 (1) Feb 02 (1) Feb 06 (4) Feb 10 (4) Feb 17 (2) Feb 28 (2) Mar 01 (1) Mar 04 (1) Mar 11 (1) Mar 12 (1) Mar 15 (1) Mar 16 (1) Mar 19 (16) Mar 23 (8) Mar 28 (1) Apr 05 (14) Apr 15 (20) Apr 21 (1) Apr 28 (2) Apr 29 (16) May 02 (15) May 03 (10) May 05 (4) May 06 (10) May 13 (3) May 14 (1) May 18 (3) May 29 (1) Jun 02 (1) Jun 03 (1) Jun 04 (5) Jun 05 (1) Jun 07 (1) Jun 08 (4) Jun 09 (2) Jun 10 (1) Jun 11 (2) Jun 14 (3) Jun 16 (3) Jun 17 (3) Jun 18 (10) Jun 19 (4) Jun 20 (3) Jun 21 (1) Jun 22 (2) Jun 23 (2) Jun 29 (1) Jul 02 (1) Jul 07 (1) Jul 17 (1) Jul 20 (1) Jul 22 (1) Aug 17 (1) Sep 09 (1) Jul 28 (2) May 15 (1) May 18 (7) May 21 (2) May 24 (1) May 26 (2) May 31 (2) Jun 01 (5) Jun 07 (2) Jun 09 (1) Jun 18 (1) Jun 20 (1) Jun 22 (2) Jul 03 (1) Jul 04 (1) Jul 06 (1) Jul 10 (1) Jul 11 (1) Jul 17 (1) Jan 31 (1) Mar 03 (1) Mar 05 (4) Mar 06 (1) Mar 09 (3) Sep 08 (4) Sep 20 (44) Sep 21 (21)
myanmar(burmese)sexy-models,actress,actors, mp4 download